Nagarik Shukrabar - यसरी जोगिन सकिन्छ चाया—पोतोबाट
शुक्रबार, १७ जेठ २०७६, ०४ : ०९ | उपेन्द्र खड्का
चाया–पोतोलै हैरान बनाएको छ ? हैरान बनाए पनि तनाव भने लिनु हुन्न । तनावले ठीक हुँदैन, तनावले त यो समस्या झन् बढाउँछ । बरु बेलैमा विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाहमा उपचार ग¥यो भने ठीक हुन्छ ।
चार महिनाअघि चाया–पोतोको यस्तै तनाव लिएर करिब ४० वर्षकी महिला स्वस्ति लेजर एण्ड स्किन केयरकी छाला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. प्रकृति ज्ञवालीकहाँ पुगिन् । ती महिलालाई यसको तनावले सताउनुको साथै थाइरोइडको पनि समस्या थियो । उनको औषधोपचार गर्दा पनि ठीक नभएपछि तनावमा परेकी रहिछन् ।
चाया–पोतोको अर्को शत्रु घाम पनि हो । ‘धेरै घाममा बस्नाले मेलानोसाइट बढेर अनुहारमा चाया–पोतो देखिन्छ,’ डा. शर्माले भने, ‘ चाया–पोतोबाट बच्न घामबाट जोगिनु पर्छ ।’ छालामा जथाभावी प्रयोग गरिने स्किन केयर प्रोडक्टले चाया–पोतो ल्याउने जोखिम त्यतिकै हुन्छ । चिकित्सकको सल्लाहबिना जथाभावि अनुहारमा क्रिम लगाउँदा यस्तो समस्या हुन्छ ।